नील नदी कम कम अनुमान गरिन्छ | नेटवर्क मौसम विज्ञान
नील नदी कम र कम अनुमानित हुन्छ
नील नदी, विगत र आज दुवैको लागि मानवहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण नदी हो, जलवायु परिवर्तनको कारण कम र कम पूर्वानुमान भइरहेको छ। जम्मा ११ देशका करिब 400०० करोड मानिसहरू यसमा निर्भर छन् तर अब विभिन्न अध्ययनका अनुसार उनीहरूले खडेरी र भारी बाढी दुवैबाट बच्न गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ।.
यसको पानी, बालीका लागि यति महत्त्वपूर्ण, फिरऊनको समयदेखि नै अध्ययन गरिएको छ। त्यसबेला, "नीलोमिटरहरू" को श्रृंखला बर्षा बाढीको आकार पत्ता लगाउन, भविष्यवाणी गर्न र नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिएको थियो। तर मौसम परिवर्तनका साथ यी भवनहरू पर्याप्त छैनन्।
जनसंख्या धेरै बढ्दै छ। २० 2050० सम्ममा नील नदीमा डबल हुने आशा, million०० मिलियनबाट 400०० सम्म जाँदैछ, त्यसैले अब तिनीहरू नदीमा निर्भर छन्। वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको निरन्तर संचयको कारण, मुसलधारे वर्षा बढी र अधिक प्रचुर हुन सक्छ, जसको मतलब यो हो कि बाढी अधिक बारम्बार हुनेछ।
नदी प्रशान्त महासागरको तापक्रम उतार चक्रबाट प्रभावित छ: २०१ 2015 मा एल निनो घटनाले गम्भीर खडेरीको कारण ईजिप्टलाई असर गर्यो। एक वर्ष पछि ला नीनाले ठूलो बाढी ल्यायो।
दशकौंदेखि नदीको बहावलाई व्यवस्थापन गर्नु राजनीतिक मुद्दा बनेको छ र समय बित्दै जाँदा र तापक्रम बढ्दै जाँदा यो झनै जटिल हुँदै गइरहेको छ। अन्वेषकहरूले चेताउनी दिएका छन् कि मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका दुबै देशहरू बढि अस्वास्थ्यकर हुन सक्छन्; बाहेक, नदीको प्रवाहको औसत मात्रा १० र १ 10% बीचमा बढ्न सक्छ, 50०% सम्म बढ्नको लागि सक्षम हुँदै, ताकि समस्याहरू धेरै गम्भीर हुनेछ।
यदि तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » नील नदी कम र कम अनुमानित हुन्छ
वर्षको दोस्रो भागमा एक एल निनो घटना हुन सक्छ
मौसम विज्ञान उपकरण र तिनीहरूको समारोह